Ithegi: ukuhanjiswa | Martech Zone
Sijolise kakhulu kwintengiso ye-imeyile kutsha nje kuba sibona iingxaki ezininzi kolu shishino. Ukuba isigqeba sokulawula siyaqhubeka ukukukhathaza kuluhlu lwakho lwe-imeyile ukukhula, kuya kufuneka ubakhombe kweli nqaku. Inyani yile, enkulu kwaye indala uluhlu lwakho lwe-imeyile, okona kungangumonakalo onokubakho kwintengiso yakho ye-imeyile. Endaweni yoko, kufuneka ujolise ekubeni bangaphi ababhalisile bakho kwi
Besihlala sibhengeza kwindawo yethu ukuba sinabanikezeli abangaphezu kwama-75,000 kuluhlu lwethu lwe-imeyile. Ngelixa bekuyinyani oko, besinengxaki yokuhanjiswa kwezinto apho sasibambeke khona kwiifolda zogaxekile kakhulu. Ngelixa ababhalisile abangama-75,000 babonakala behle xa ufuna abaxhasi be-imeyile, kuyothusa kakhulu xa iingcali ze-imeyile zikwazisa ukuba abayifumani i-imeyile yakho kuba ibibambekile kwifolda ye-junk. Yindawo engaqhelekanga
Iimpazamo ezi-5 ezinokufumana i-imeyile yakho kwiFolda yeSpam
NgeCawa, Meyi 3, 2015 NgeCawa, Meyi 3, 2015 Douglas Karr
Ukuba kukho icandelo lomsebenzi wam eliqhubekayo lokundibetha ndibhekise eludongeni ngentloko, kukuhanjiswa kwe-imeyile. Siyaqhubeka nokukhulisa uluhlu lwababhalisi be-imeyile kodwa i-geesh, ii-ISPs azihlekisi. Kumashishini, inye into eyenzekayo kukuba ii-imeyile ziyajika njengoko abasebenzi besiza behamba. Siza kuba nababhalisi sihlala sinxibelelana kangangeenyanga emva koko- poof- ii-imeyile ziyangqubeka. Okanye okubi kakhulu, bahanjiswa kwenye